inguqulelo 0.6.4 – Olu umkhandi akukho kuphinda neembadada
EyeDwarha 14, 2010 ngokuthi umnikelo 2 izimvo
Eli xesha nithelele yi mntu wumbi ngaphandle Mat Mullenweg, umdali eqongeni WordPress.
Udliwanondlebe ukuqhatha ngokupheleleyo zilandelayo, Matt kuya kusinceda siqonde sonke into entsha 0.6.4:
Ofer: hello Mat, unjani namhlanje?
Mat: Mna andizange ndandingxamele ingongoma 0.01 ukukhululwa yongeniso phambi!
Ofer: Kutheni kunjalo?
Mat: Ndicinga ukuba ekugqibeleni umoya Wordpress kolu khutsho
Mat: Ewe, ukuba ekugqibeleni ukudibanisa kunye eqongeni endaweni kusiko ngeenxa, Ngokwenene Ndiyayithanda into yokuba ekugqibeleni wathabatha ixesha wenza kujongano Java kunye namaphepha yolawulo iqela lo, yaye ekubeni wena ukuba kulungile, ufumana blog ivideo!
Ofer: gee, enkosi! ngoku ndiya njani abanye abantu ukuba wenze iinguqulelo Java yam?
Mat: cela nje abasebenzisi bakho ukwenza ukuba, Ndiqinisekile uya kubanika ngetyala.
Ofer: Baxelele yonke into malunga poedit kunye iimpahla?
Mat: Ima kancinci, njengokuba mna usoloko esithi, kukho Java loo! Kwaye kufuneka uyazi mhlawumbi ekubeni wayiguqulela wena negalelo ezinye minor fixes.
Ofer: Ukhohlakele zalapha codestyling?
Mat: Ewe, oko lowo, umntu ayisebenzise. Kodwa ndinombuzo kuni
Ofer: Ukwenzela mna?
Mat: Ewe, ibiyini na ukuba usebenzise Transposh zokwenza loo?
Ofer: Akazange abone isizathu, njengoko kukho sele Java kakhulu kuba, kutheni ekunabiseleni?
Mat: Ndiyabona ukuba ekugqibeleni oko.
Ofer: Ukufumana izinto?
Mat: Umoya Wordpress, ukwabelana, nenkathalo, Vula Umnikezi, and love ezamahala.
Ofer: Mna themba ukuze, enkosi kangaka ngokuba nathi.
Mat: Enkosi, kwixesha elilandelalayo, lonmtu kum inkalo ephambili, ukuba kwakufuneka enze udliwano ukuqhatha akhululwe zonke iplagi engephi Wordpress, Andinakuze ixesha simahla ngokwenene kuphuculwe Wordpress uze wordcamps.
Ofer: Uya isaziso, Enkosi kwakhona!
kakuhle, enkosi Mat kubanathi apha, ezinye iimpawu nako kongezwa kule liqulathwe inguqulelo yesiLatini kongezelelwa (kunye google translation inkxaso), ngeelwimi ezintathu ezintsha kongezwa Bing ukuguqulela. Ukukwazi ukukhubaza ukuhlanganiswa gettext apho ibangele iingxaki, kunye nabanye lebug.
Njengesiqhelo – siyathemba uza konwabela olu guqulelo
ifayilishwe Phantsi: izaziso Release ephawulweyo Nge: bing (MSN) umguquli, ndlebe ukuqhatha, gettext, uphando loshintsho magama, matt mullenweg, engephi, kweelwimi ezininzi, khulula
inguqulelo 0.6.3 – GetText Uhlanganiso
EyoMsintsi 1, 2010 ngokuthi umnikelo 14 izimvo
GetText yenza inguqulelo lula
Le nguqulelo intsha iinguqulelo ezimbini eziphambili kunye amaqashiso bug fixes ziquka.
Eyona tshintsho lubalulekileyo yindibaniso ye Java nenkqubo WordPress GetText, leyo yindlela WordPress (kunye nemixholo, aze plugins) ukubonelela iinguqulelo lwasekhaya ngokwabo. Oku kwenziwa isibini lwefayile (ngokuba iifayile .po / .mo ngenxa ukwandiswa zabo) equka uluhlu lwamagama iguqulelwe ukuba software ziquka.
Yintoni ngoku Transposh ayenzayo ukusebenzisa wathi iifayile, ngoko ke ukuba une iifayile aguqulelayo WordPress ukuya Spanish, baya kuqala kunye Transposh uya kusebenzisa iifayile ukwenza inguqulelo elilujongano Spanish. Kutheni ngcono oku? kukho izizathu ezimbalwa, omnye kukuba ngamanye amaxesha yenza iinguqulelo apho kwanzima ngaphambili, omnye kukuba nguqulelo oluntu kwaye kuthathwa echanileyo, yokugqibela kukuba linokususa ambolombini ingakumbi umtya elifutshane afana namagama ngenyanga kunye nezishunqulelo usuku.
Ungayifumana njani le .po / .mo iifayile, ulwazi nangaphezulu malunga nendlela inokufumaneka lo msebenzi xa http://trac.transposh.org/wiki/UsingGetText.
Lo msebenzi osemqoka likwabandakanya yecebo inkqubo ye cache kwi-CD ye Java, ngoku sixhasa xcache kwaye eaccelarator ukongeza yalawo APC inkxaso. Olu guqulelo lusebenzisa ukumelwa compact nangaphezulu data uphucula usebenziso yokusebenza nokunciphisa memory.
lebug Okuninzi kolu guqulelo:
Tags liphuma efini usazise ngoku eguqulelwe ubunzima aguqulele
Ukuqingqa ngenxa sneaky “akukho header Java elisebenzayo” khupha, ukuba ufumana “silela” zidweliswe kabini izicwangciso ukhetho widget yakho, nceda ukucima widgets / ifayile tpw_deafult.php
Ukuqingqa MS ukuguqulela utyekelo ukongeza isithuba engaphezulu translation japan
bug esisigxina kunye noluhlu ipali CSS widget ekuthinteleni imboniselo kweflegi
Siye awuyitshintshanga le site kubeko kancinci ukuze ubone ifidi Uphuhliso neenguqu ngexesha yefashoni yokwenene.
Ilindele feedbacks zakho olu guqulelo.
Gqiba: A bug yafunyanwa xa usebenzisa Java ngaphandle cache, ukuba phinda iinguqulelo, okanye awukwazi ukubona iinguqulelo ngaphambili, nceda ukuyifaka le Java ukusuka wordpress.org, echwetheza kukho ngoku esisigxina. Enkosi Nicholas ngokuchaza olu.
ifayilishwe Phantsi: Imiyalezo Jikelele ephawulweyo Nge: APC, bing (MSN) umguquli, Bugfix, eaccelarator, gettext, engephi, khulula, Java Wordpress, xcache